mpiasa - KoloikoWiki
Fanononana (IPA): ['mpiasə] ( henoy)
Olona mikarama manao asa iray.
Efa mirava ny mpiasa.
Ohabolana momba ny mpiasa
Izay miaraka amin'ny mpiasa dia mpiasa; izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo.
Ilazana fa izay mitovy hevitra sy toetra ihany no mahay miaraka sy mifankahazo. Ny amboalambo dia midika ho olona manjenizeny foana, tsy manana anton'asa fa olona fetsifetsy.
Mipetra-potsiny ohatra ny lamban'ny mpiasa.
Anoharana ireo olona tsy miasa fa mipetraka fotsiny ao an-trano ohatra.
Mpiasa be miasa famoloana: mifamadika samy marina.
Ilazana ireo olona samy manana toetra tsara nefa mifamadika sy mifamingana.
Mpandova tsy mahay mitahiry: ho andevon' ny mpiasa hendry.
Entina anoharana hoe ny manana lovabe aza ianao nefa tsy hainao ny nitahiry sy nitanatana ilay lova dia mety ilay olona iray izay tsy manana lova be saingy nahay nihary no ho lasa manankarena noho ianao.
Mpiasa be kibo, ka sahala ihany ny lany sy ny vita.
Ilazana ireo mpiasa izay tsy mba mitahiry ny vola azony fa mandanindany foana izany.
Mpiasa tsy mahavoky tena.
Ilazana ire olona izay mizara ireo rehetra izay azony. Entina anoharana koa hoe ny mpiasa dia tsy afaka mikarakara ny sakafony mila olona hafa hanao an'izany. Heviny hafa koa dia anoharana hoe miasa ilay olona iray nefa tsy ampy ivelomany ny karama azony.
Salakan'ny mpiasa ka mandrohy azy tompony ihany.
Entina ilazana ny lainga ataon'ny olona. Izany hoe Ilay olona mandainga ihany no mizaka ny vokany.
Telo no amboalambo: ny anankiray mpiasa, anankiray mpihinan-kena, ary ny anankiray jiolahy.
Entina ilazana hoe misy karazany telo ireo olona mpanjeninjeny (amboalambo): Ao ireo miasa mitady vola, ao ireo mpangalatra (oharina amin'ny mpihinan-kena), ary ao ireo jiolahy.
Tsy satrin'ny mpiasa ny ho be herikerika, fa ny mpanatitsakafo no mivezivezy.
Indraindray ireo olona mpanatitra sakafo hoan'ny mpiasa eny antanimbary dia ilaozany mivezivezy fotsiny ka lasa tara ny sakafon'ny mpiasa. Vokatr'izany dia lasa miherikerika sy mitazatazana ireo mpiasa satria efa noana te hihinan-kanina.
Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga.
Entina ilazana hoe ny zava-bitan'olona iray, na ny vokatra azo ihany no itsarana hoe tena niasa tokoa ilay olona.
Mpiasa be vonton'anatra ka manao mbay lalana an-tsena.
Ilazana ireo olona izay diso hendry loatra ka na eny an-tsena avy aza izy dia manao mbay lalana (manao azafady rehefa handalo eo anoloan'olona).
Teny mitovy amin'ny mpiasa
Teny mifanohitra amin'ny mpiasa
Retrieved from "https://koloiko.com/wiki/index.php?title=mpiasa&oldid=438"
This page was last edited on 19 August 2018, at 13:01.